IGlycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC): Olona Xabiso lubalaseleyo lokwakha umzimba
Yintoni iGlycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC)
IGlycine Propionyl-L-Carnitine ibhekisa kuhlobo lwe-molecularly bonded yepropionyl-L-carnitine kunye ne-amino acid glycine. Ihlelwe kusapho ngokufanayo kwiCarnitine kwaye ibalulekile ekumiselweni kweCreatine. I-Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) isebenza njenge-antioxidant, kwaye ikhokelela kumlo onempembelelo ngokuchasene neeradicals zasimahla kunye nokukhusela kwi-lipid peroxidation.
Ngaphaya koko, iyanceda ekwakhiweni kwamandla ngokwenza ukuba i-fatty chain fatty transmission in mitochondria. Inceda ekususeni inkunkuma ekupheliseni- i-carnitine aids ekukhuseleni umzimba kwisifo sentliziyo kunye neswekile. I-GPLC ithathwa njengomsebenzi wokukhuthaza ukukhula kwemisipha kunye nokwandisa ukusebenza komzimba. Isongezelelo sinokuthathwa kunye nezinye izongezo, umzekelo, ipropionyl-l-carnitine l-arginine kunye ne-niacin, enceda ekuphuculeni ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED) emadodeni. Nangona kunjalo, fumana idosi efanelekileyo kugqirha wakho ukunqanda ukugqithisa, okunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezibi.
Iimpawu ze-Propionyl-l-carnitine zibandakanya; I-3-propanoyloxy-4- (trimethylazaniumyl) butanoate, Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9), I-L-carnitine propionyl, i-PLC, i-LPC, kunye ne-Glycine propionyl-L-Carnitine Hydrochloride. I isongezelelo sokutya kuthengiswa phantsi kwamagama ohlobo oluthile lweshishini ngokuxhomekeke kwindawo okuyo. Nangona kunjalo, oko akufuneki kube yingxaki yakho; Iidiyali kufuneka zikwazi ukukhokhela ukuthenga.
Esi songezelelo siyafumaneka kwiivenkile ezahlukeneyo ze-Intanethi apho unokungenisa ngaphandle kweengxaki. Umzekelo, ipropionyl-l-carnitine iWalmart ihambisa ngexesha elifutshane elinokwenzeka. Ayinamsebenzi ukuba uphi, sebenzisa i-smartphone okanye ikhompyuter yakho kwaye wenze ipropionyl-l-carnitine yeWalmart order namhlanje. Kuyacetyiswa ukuba wenze uphando lwakho kubathengisi be-glycine propionyl ngaphambi kokuthatha isigqibo sakho sokugqibela. Funda uphononongo lwepropionyl-l-carnitine Reddit ukufumana isishwankathelo sendlela abathengisi okanye isongezelelo esisebenza ngayo. Abathengi bahlala beveza uluvo lwabo ngokunyaniseka malunga nesongezelelo, esinokukunceda ekukhetheni umthengisi ongcono. Ugqirha wakho uya kuba ngoyena mntu unokukukhokela ukuba ungakufumana phi kwaye njani ukufumana isongezelelo esisemgangathweni esiza kukunceda ufezekise iinjongo zakho.
IGlycine Propionyl-L-Carnitine vs L-Carnitine
I-GPCL yaziwa ngokuba yi-Carnitine's propionyl ester equlathe enye indawo yeglycine. Ngenxa yee-enzymes ze-tishu esterase, i-Glycine Propionyl-L-Carnitine testosterone kufuneka idlale indima yeprodrug kwaye ikhokelela kwi-glycine, Carnitine, kunye nepropionic acid emzimbeni womntu. I-Glycine Propionyl-L-Carnitine kunye ne-L-Carnitine yahlukile kubukhulu obuthile. Zombini ziyanceda kwimveliso yamandla kwaye nazo ukukhula kwemisipha. I-Glycine propionyl-L-carnitine evavanya ikwanceda ukuba umzimba wakho uphinde uchache kwizifo ezinjengesifo sentliziyo.
Ngokuchasene noko, i-L-Carnitine idla ngokusetyenziswa kunyango lwentlungu yomlenze nakwizifo zentliziyo. I-L-Carnitine yimichiza ngelixa uvavanyo lwe-Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9) limolekyulu. Ngamafutshane, uGlycine Propionyl-L-Carnitine testosterone ulwa sisifo ngelixa uL-Carnitine uphilisa izifo.
Iziphumo zeGlycine Propionyl-L-Carnitine
Oku kulandelayo glycine propionyl L Izibonelelo ze-carnitine:
Ubonelelo lwamandla. IPropionyl-L-carnitine inceda umzimba ukuba uvelise amandla. Kubalulekile ekusebenzeni kwentliziyo okufanelekileyo, ukuhamba kwezihlunu, phakathi kwezinye iinkqubo zomzimba. Ikwanoxanduva lokujikeleza kwegazi okuphezulu emzimbeni.
Ukunyanga amanqanaba asezantsi e testosterone. Ukuguga kunokubangela i-testosterone ephantsi emadodeni. IPropionyl-L-carnitine efakwe iacetyl-L-carnitine kwiinyanga ezintandathu sisisombululo esisezantsi. ukusebenza ngokwesondo, uxinzelelo, kunye nokudinwa kumadoda amadala. Olu dibaniso lusebenza njenge testosterone yokwenziwa.
I-Angina okanye isifuba. Ukuthatha i-propionyl-L-carnitine ngomlomo kunceda abantu abane-angina bahambele phambili. Kwabanye abantu, inokunciphisa ukuhamba kweentlungu zesifuba.
Iphatha isifo senhliziyo esinganyangekiyo. Xa utofa ipropionyl-L-carnitine emthanjeni, inceda impompo yentliziyo ngcono ebantwini kubantu abanesifo sentliziyo.
Ukungaphumeleli kwentliziyo (CHF). IPropionyl-L-carnitine sisidakamizwa esisebenzayo sabantu abane-CHF emileyo okanye ethambileyo. Iphucula indlela iintliziyo zabo ezisebenza ngayo kwaye ibancede ukuba bahambe imigama emide.
I-Glycine propionyl l carnitine kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Ngokwanda kwehomoni ze testosterone emzimbeni wakho, esi songezelelo sizisombulula ngokuzenzekelayo iingxaki ze-erectile kunye nokwandisa ukuqhutywa kwesondo emadodeni.
Ipropionyl-L-carnitine ihlala ixutywa neViagra (sildenafil) kwiziphumo ezingcono kumadoda ane-ED kunye neswekile. Ngaphaya koko, izithako ezithile eziqukethe ipropionyl-L-carnitine inokukhuthaza ukusebenza ngokwesondo.
Izigulo zemithambo yegazi.. Izifo ezijikelezayo zinokubangela ukudumba kwamathambo okanye iintlungu emlenzeni ngelixa uhamba; imeko ebizwa ngokuba kukudlula kwelinye icala. Inaliti yenaliti okanye ukungenisa ngokuthe ngqo kwe-Propionyl-L-carnitine inceda abantu abaneentlungu zomlenze ukuba bahambe imigama emide.
Isifo sikaPeyronie (siqinisa izicubu zepenisi)Iyeza elibizwa ngokuba yi-verapamil, kunye nepropionyl-L-carnitine inyusa ukusebenza ngokwesondo, kuthintela ukuwohloka kwemeko. Umdibaniso ungathathwa ngomlomo okanye ngenaliti. Isifo sikaPeyronie sinokufuna utyando ukuba asikho. Ngenxa yoko, iPropionyl-L-Carnitine iza kunceda.
Isifo samathumbu (ulcerative colitis). IPropionyl-L-carnitine iluncedo ekunciphiseni iimpawu kwizigulana ezinezilonda ezikwenza ukuba ube phantsi kolusu. Inokuphelisa iimpawu.
IGlycine Propionyl-L-Carnitine yoPhando kunye neziBonelelo
Isifo sikaCrohn (isifo sesisu)Uphando lokuqala lubonisa ukuba ukusebenzisa ipropionyl-L-carnitine kunciphisa kakhulu iimpawu kwizigulana ezinesifo sikaCrohn.
Isifo sokunyamekela esingapheliyo (CFS).Izifundo zibonisa ukuba i-propionyl-L-carnitine inokuphucula ukukhathala ngokubanzi kwizigulana zeCFS. Into enomdla kukuba, ukuba i-acetyl-L-carnitine ixutywe ne-propionyl-L-carnitine, isiphumo asisebenzi kakuhle kunokusebenzisa nayiphi na into eyongezelelweyo.
Umthambo. Imba iya kukonyusa amandla ebhayisikile, amandla okunyamezela ubunzima bokuzilolonga. Nangona kunjalo, thatha ngokufanelekileyo glycine propionyl-l-carnitine umthamo. Ukugqithisa ngaphezulu kwesi songezo kunokubangela i-glycine propionyl-l-carnitine HCl iziphumo ebezingalindelekanga, ezinokuba yindleko ukubuyisela umva.
Kukuphi ukutya okufumileyo kwiGlycine Propionyl-L-Carnitine?
I-Glycine propionyl-l-carnitine ifumaneka ikakhulu:
Imifuno enamagqabi amnyama,
Ungayithatha njani i-Glycine Propionyl-L-Carnitine
IPropionyl-L-Carnitine ithengiswa njengesongezelelo. Ungayifumana kwivenkile yakho yendawo okanye ekhemisi. Iimbaleki zinokungenelwa kakhulu ekuzithabatheni kuba zinceda umzimba ukuba uhlale usebenza kakuhle kwimisipha kwaye unyusa amandla okuhamba kwamalungu eeseli. Nazi i-Glycine Propionyl-L-Carnitine ecetyiswayo423152-20-9) umthamo uxhaswa kuphando lwenzululwazi.
Ukunyanga ukuphazamiseka kwemithambo yegazi: Thatha i-500-2000 mg propionyl-L-carnitine izihlandlo ezibini ngosuku.
Ukunyanga i-CHF (ukusilela kwentliziyo ekhathazekileyo), i-angina okanye iintlungu zesifuba; Thatha i-500 mg propionyl-L-carnitine kathathu ngemini.
Ukunyusa i-testosterone kumadoda asele ekhulile: Thatha iigram ezimbini ze-propionyl-L-carnitine kunye nee-gram ezimbini ze-acetyl-L-carnitine mihla le.
I-Glycine propionyl l carnitine kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile: Thatha iigram ezimbini ze-propionyl-L-carnitine imihla ngemihla ezixutywe ne-2 mg ye sinikwa kabini ngeveki. Umdibaniso othile wepropionyl-L-carnitine l-arginine kunye niacin iya kukhulisa ikhomputha yakho yesini. Nangona kunjalo, ithamo kufuneka libe yi-250mg fir propionyl-L-carnitine kunye ne-20mg ye-niacin. Kwelinye icala, unokuthatha kunye nokongezwa nge-arginine 2500 mg ngemini.
Kwisifo sikaPeyronie: 2 gram yepropionyl-L-carnitine mihla le ngokudibeneyo ngenaliti yeyeza elibizwa ngokuba yi-verapamil.
Kwi-colitis ulcerative: i-0.5-1 gram ye-propionyl-L-carnitine kabini imihla ngemihla.
Unokudibanisa ne-l -carnitine, kunye neCialis, kodwa ufumane umthamo ofanelekileyo kwiingcali zonyango ukuze ube namava angcono.
Kwizifo zentliziyo kunye nokuphazamiseka kwenqanawa yegazi: Iingcali zempilo zilawula inaliti ye-propionyl-L-carnitine, inkqubo ebizwa ngokuba yi-IV.
Iimpembelelo zeGlycine Propionyl-L-Carnitine kunye noKhuseleko
IPropionyl-L-carnitine ikhuselekile kubantu abaninzi xa ithathwa ngomlomo okanye injana emthanjeni ngugqirha oyingcali. Isenokubangela isisu, ukonyuka kwesisu, iintlungu zesisu, ukugabha, iintlungu zangasemva, kunye nosulelo lwesifuba. Ukongeza, kunokubangela iphunga elibi lokuphefumla, umchamo, okanye ukubila.
Abasebenzisi abakhulelweyo nabancancisa abantwana: Kuncinci okwaziwayo malunga nokusetyenziswa kwepropionyl-L-carnitine yokuqhomfa okanye ukulindela umama. Qhubeka ngononophelo kwaye uphephe ukusebenzisa.
"Ukungasebenzi kwe-thyroid" (i-hypothyroidism): i-propionyl-L-carnitine ingenza i-hypothyroidism ibe yimbi okanye unyango lwe-thyroid lungasebenzi. Imichiza ekwichiza, okt L-carnitine, iphazamisa ihomoni yedlala lengqula. Kungcono ukunqanda ipropionyl-L-carnitine ukuba une-hypothyroidism.
Ukuthathwa: Abantu abambalwa abanembali yokuthathwa baye baxela ukonyuka kobunzima kunye nenani lokuthathwa emva kokusebenzisa iL-carnitine. Kukho amathuba amakhulu okuba oku kunokwenzeka ngepropionyl-L-carnitine kuba inekhemikhali efanayo.
Unxibelelwano lwe-GPLC kunye namanye amayeza
Ukuba kwicala elikhuselekileyo, bonana nodokotela ngaphambi kokuba uqale ukuthatha iGPLC. Kwimeko yokuba uthatha i-Acenocoumarol (Sintrom), kuya kufuneka ubandakanye ugqirha wakho njengoko kunokuba nokusebenzisana kancinci kuba kunokunciphisa ukubetheka kwegazi ngelixa i-GPLC inokunyusa iziphumo zeSintrom.
IWarfarin (Coumadin) lelinye iyeza onokulithatha kunye nesongezelelo se-glycine propionyl-l-carnitine. Nangona kunjalo, soloko uqinisekisa ukuba ufumana idosi efanelekileyo kumayeza akho. Iidosi zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yonyango.
Ungayithenga phi i-Propionyl-L-Carnitine eyongeziweyo
Njengayo nayiphi na enye imveliso yezonyango, ungathenga i-glycine Propionyl-L-Carnitine izongezelelo ezivela kumaqonga akwi-Intanethi okanye kwiilebhu zonyango lomzimba. Nangona kunjalo, umngeni uza ekukhetheni umthengisi ofanelekileyo oza kukubonelela ngemveliso esemgangathweni. Zininzi glycine Propionyl-l-Carnitine abathengisi bomgubo, kokubini okwasemzimbeni nakwi-Intanethi. Nangona kunjalo, ayifanele ikoyikise, into oyifunayo kukuthatha ixesha lakho kwaye wenze uphando malunga ne-glycine Propionyl-l-Carnitine abathengisi be powder.
Unenkululeko yokuthenga iglycine Propionyl l-Carnitine umgubo omninzi okanye owaneleyo ukuze uwusebenzise. Khumbula, ukusoloko ufumana idosi elungileyo kugqirha ukuze ukonwabele ubuninzi be-glycine propionyl-L-carnitine. Cinga ngokuhamba ngepropionyl-l-carnitine Redditreviews ukufumana isishwankathelo samava ahlukeneyo omsebenzisi. Unokuthenga kwakhona i-carnitine kunye neCialis kumthengisi ofanayo, phakathi kwezinye izongezo. Iimpawu zePropionyl-l-carnitine ziyahluka ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, kodwa iseyinto efanayo yokongeza. Qinisekisa nogqirha wakho ngaphambi kokwenza iodolo.
Umququzeleli, ubunkokheli bobunkokheli kwinkampani; I-PhD ifunyenwe kwiYunivesithi yaseFudan kwi-organic chemistry. Ngaphezulu kweminyaka esithoba yamava kwicandelo lokudibanisa izinto eziphilayo. Amava atyebileyo kwi-chemistry yokudibanisa, amayeza ekhemesti kunye nokwenziwa kwesiko kunye nolawulo lweprojekthi.
I-Stasi, MA, iScioli, MG, Arcuri, G., Mattera, GG, Lombardo, K., Marcellini, M.,… kunye neBorsini, F. (2010). Ipropionyl-l-carnitine iphucula ukubuyiswa kokuhamba kwegazi emva kweschemic kunye ne-arteriogenesis revascularization kunye nokunciphisa ukuphela kwe-NADPH-oxidase 4-Mediated superoxide production. I-arteriossteosis, i-thrombosis, kunye ne-biology yevasal, 30(3), 426-435.
UGianfrilli, D., uLauretta, R., uDi Dato, uC., UGraziadio, uC., UPozza, uC., UDe Larichaudy, uJ., No-Lenzi, A. (2012). Ipropionyl ‐ l-carnitine, l-arginine kunye ne-niacin kumayeza ezesondo: indlela yesondlo kwi-erectile dysfunction. Andrologia, 44, 600-604.
Flayyih, NK (2015). Iziphumo ze-L-carnitine ezilawulwa kwiigundane ezikhulelweyo ekusebenzeni ngokuzala kokuphuma kwabasetyhini. Ijenali yeWassit yeSayensi kunye noNyango, 8(1), 97-104.
1.Yintoni iGlycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC)
2.I-Glycine Propionyl-L-Carnitine vs.L-Carnitine
Iziphumo ze-3.Glycine Propionyl-L-Carnitine
4. Uphando lweGlycine Propionyl-L-Carnitine kunye nesiphumo
5.Kukuphi ukutya okuTyebileyo kwiGlycine Propionyl-L-Carnitine?
6.Ukuthatha njani iGlycine Propionyl-L-Carnitine
7. I-Glycine Propionyl-L-Carnitine Iziphumo ebezingalindelekanga kunye noKhuseleko
8. Ukudibana kwe-GPLC namanye amayeza
9. Apho ukuthenga iPropionyl-L-Carnitine isongezelelo
I-Oleoylethanolamide (i-OEA): Isiyobisi esilahlekelwe sisisindo esinceda ukuba kulawulwe ukutya.
Yonke into ekufuneka uyazi ngeNicotinamide Riboside Chloride
Ngaba iPalmitoylethanolamide (i-PEA) Ngaba unezibonelelo zokuPhulukana nobunzima?
I-WISEPOWDER ijolise kuphando, ukuvelisa kunye nokuvelisa izithako zezongezelelo ze-nootropic kunye nezesondlo. Singumvelisi wezithako oqeqeshiweyo onobuchule kunye nomthengisi weekhemikhali zamayeza, izongezo zesondlo kunye neemveliso zebhayoloji.
I-2021 Magnesium L-threonate yokuBuyiselwa kweBongo ukuBonelela ngeNootropic efanelekileyo
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN): Izibonelelo, iidosi, isongezelelo, uphando
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Asenzi mabango malunga neemveliso ezithengiswe kule webhusayithi. Akukho lwazi lubonelelweyo kule webhusayithi luye lwavavanywa yi-FDA okanye yi-MHRA. Naluphi na ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lubonelelwa ngokolwazi lwethu kwaye ayijoliswanga ukubuyisela ingcebiso ngugqirha oqeqeshiweyo. Nawuphi na ubungqina okanye uphononongo lwemveliso olunikezwe ngabathengi bethu ayizizo izimvo ze-huspindder.com kwaye akufuneki zithathwe njengengcebiso okanye inyani. Ilungelo lokushicilela © WISEPOWDER Inc.